Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny bretôna
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny bretôna
Manolotra kolontsaina, sakafo ary natiora ho an'ny kôpta i Cape Bretagne.
Ny ankamaroan'ny charme amin'ny Breton Breton dia avy amin'ny olona monina ao. Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Cape Bretoners fotsiny dia asa atao ankafizina. Mazava ho azy fa tsy manimba ny hatsaran-tarehin'ny nosy sy ny toerana misy azy. Raha mitady fety na te hisotro amin'ny kolontsaina sy ny toerana ianao, eto dia lisitr'ireo zavatra tokony hataonao ao amin'ny Bretôna Capet.
Ataovy ny Cabot Trail
Nantsoina ho mpikaroka mpikaroka John Cabot ilay rivodoza Cabot, izay mamakivaky ny faran'ny avaratry ny nosy Cape Breton. Ny mpandeha na ireo mpitaingina bisikileta mafimafy dia manomboka sy mifarana amin'ny teboka marobe ao amin'ny faritra, fa matetika manao izany any amin'ny tanànan'i Baddeck. Ny 300 kilaometatra (185 mn.) Long Cabot Trail dia malaza amin'ny takila atolotr'izy ireo any amin'ny Golfa St. Lawrence, ny Oseana Atlantika sy ny tanimboly mahafinaritra, indrindra indrindra rehefa lavo. Ny Valan-javaboarin'i Cape Bretagne National Highlands dia any amin'ny ambaratonga avaratra indrindra sy any amin'ny toerana avoakan'ny lalan-kely. Ny lalana dia mandeha ora vitsivitsy handehanana, fa ny mpizaha tany kosa dia mandany andro iray na roa, ary mijanona ao amin'ny tanàna iray na roa eny an-dalana.
Tsidiho ny Fortress of Louisbourg
Ny Fortress of Louisbourg dia harena tsy nampoizina ho an'ny mpitsidika any Cape Breton. Iray amin'ireo seranan-tsambo indrindra any Amerika Avaratra nandritra ny taonjato faha-18 ary iray amin'ireo foibe ara-toekarena ara-toekarena sy ara-tafika ao amin'ny Tontolo Vaovao ny androany, ny Fanjakan'i Louisbourg dia ny fanavaozana lehibe indrindra any Amerika Avaratra. Ireo mpitsidika dia mahazo fahatsapana tsara ho an'ny fiainana tahaka ny tamin'ny taona 1700 tamin'ny alalan'ny fampisehoana, mpandika teny an-tserasera, ary na trano fisakafoanana iray izay manolotra ny vidin'ny nentin-drazana. Ny tanàna miorina ao Louisbourg no misy ny manda ary ao anatin'ny rafitra nasionaly Parks Canada.
Raha tianao ny lobster, dia afaka misakafo maraina, midina sy alina ao Cape Breton (McDonalds dia manamboatra sandwich McLobster, izay misy mangatsiaka sy sandwich tena izy). Ny lobster dia trandrahina isan'andro ao amin'ny Cape Breton Mey hatramin'ny Jolay, saingy betsaka tokoa ny seafood satria ny orinasam-pamokarana dia mitombo isan-taona ao amin'ny tanibe Nova Scotia. Hahita famantarana momba ny sakafo hariva any amin'ny nosy ianao, indrindra eo amin'ny morontsiraka.
Mandehana any amin'ny Festival Celtic Colors
Raha mitsidika ny Cap Breton ianao amin'ny volana Oktobra, dia azonao atao ny maka ny mena, mavo ary oranges amin'ny ravin-tsofa ary mandray anjara amin'ny fety lehibe indrindra any Nova Scotia. Ny Kolotsaina Celtic dia mankalaza ny lovan-tsoratry ny bretôna kapôty amin'ny alàlan'ny mozika, sakafo, kolontsaina ary antoko iray alina lasa izay any Baddeck, ivon'ny hetsika nandritra ny fetibe.
Jereo ny Ceildh (antsoina hoe Kay-lee)
Raha mitsidika ny Cap Breton ianao, dia ho takatrao ny fahitan'ny mozika an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny mponina. Ireo hetsika malaza toa an'i Rita McNeil, Stan Rogers, ary Ashley McIsaac dia teraka tany Cape Breton, na niaina tany ary nanjary nisy fiantraikany tamin'ny mozika. Ny iray amin'ireo traikefa tena marina ho an'ny mpitsidika dia ny manatrika ceilidh (antsoina hoe "kay-lee"). Ireo fivoriana am-pirahalahiana mahazatra dia natao any amin'ny lapan'ny tanàna, pubs sy trano fisakafoanana manerana ny nosy mandritra ny alina ary omena ny rehetra. Misy ny Ceilidh Trail - lalana iray manasaraka ny morontsiraka andrefan'ny Cape Breton any andrefan'ny Canso ka hatrany Cabot Trail.
Gulf the Fab Four
Bretôna Cape Breton dia toerana tsara indrindra amin'ny Golf Indiana. Ny nosy Maritime dia manana ny "Fabulous Foursome" - Highlands Links, Bell Bay, Le Portage ary Dundee. Ny telo amin'ireo làlana efatra ireo dia ao amin'ny Cabot Trail, samy manana ny fomba fijery tsara momba ny rano, ary ny rehetra dia misokatra ho an'ny besinimaro.
Mandehana any amin'ny Whale Watching
Manodidina ny Ranomasimbe Atlantika, ny rano Bretôna Cape dia misy toerana tsara indrindra ahitàna trozona na mandeha amin'ny fitsangatsanganana, toy ny Love Boat Whale sy Cruise amoron-dranomasina ao Cheticamp.
Tsidiho ny tranombakoka mineraly
Ao amin'ny Glace Bay, ny Tranoben'ny mpitrandraka dia manolotra ireo mpitsidika ny fahafahana hiaina ny fiainan'ireo mpitrandraka amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana fifanakalozan-dronono ho an'ny trano fitrandrahana harena an-kibon'ny tany.
Ny bretôna Capé dia manana tantara manankarena momba ny fitrandrahana arintany, nanomboka tamin'ny taona 1700 ary nanohy ny taona 1980 rehefa nikatona ny toeram-pitrandrahana farany. Ny fizahan-tany dia nomen'ireo mpitrandraka taloha, izay nanome ny fahatsapana ny maha-azo itokiana azy.
Ny olona manana fihenam-bidy amin'ny tebiteby, na ny toerana mivaivay na ny olona lava be dia mety hanana olana amin'ny fanatrehana fitsangatsanganana, toy ny tonelina eo amin'ny 5 metatra ambony.
Sakafo atoandro sy mofomamy amin'ny gilasy Glenora
Sary natolotr'i Glenora Distillery
Glenora dia mamokatra Whisky maloto avy any Kanada: Glen Breton Rare Canadian Single Malt Whisky. Ny toeram-pamokarana dia hita any amin'ny havoanan'i Glenville, Cape Breton, ary misy efitra fandraisam-bahiny, trano fivarotana sy efitra fisakafoanana. Na dia tsy liana amin'ny whisky aza ianao, dia manolotra sakafo matsiro ny fantsom-panafody, anisan'izany ny tsiranoka mofomamy mofomamy mafana (tsy dia mafana loatra), ary teboka eo an-toerana amin'ny tapany.
Hividy ny Tranoben'ny Artisan
Manintona mpanakanto maro ny hatsarana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Breton Bretagne. Amin'ny ankapobeny ao amin'ny Cabot Trail, atsaharo ny sasany amin'ireo fivarotana maro eny an-dàlana ho an'ny firavaka tokana, sary hosodoko, akanjo, koveta vita amin'ny hazo, harona, vilia ary ny sisa.
Faha-kanadiana Kanadianina: 10 mahatalanjona
Mankany Kanada araka ny volana sy ny tanàna
Yurt Holidays any Kanada
Salt Spring Island Gay Guide - Weekend amin'ny Nosy Spring Spring
Ireo mpizaha tany mpirenireny dia mitarika an'i Brooklyn
Inona no tokony hijerena sy atao ao St. Thomas, USVI
Inona no mety hitranga rehefa mipetraka any Florida?
Alefaso amin'ny fanombohana ny fialan-tsasatra ny fialan-tsasatra, ary valio ny valim-pifalianao ankehitriny
Tsidiho ny Fialan-tsasatry ny Farihy Saguaro ao Phoenix, Arizona
4 Topika ho an'ny Waffles tsara indrindra any NYC
Sary avy amin'ny volombava
Pittsburgh notarihina sy fitarihana fitsidihana manokana
Diary an'ny mpitrandraka amin'ny voalohany
Ny Lyric Theatrical Profile of Oklahoma City
7 Ny antony tokony hipetrahan'ny mpifanolo-bodirindrina amin'i Ditmars